သင်ရဲ့ လစာနဲ့ ပိုက်ဆံတွေ သင့်လက်ချောင်းတွေ ကြားထဲက ထိန်းလို့မရအောင် ကြပ်ပျောက် ငှက်ပျောက် ပျောက်နေပါလား. ? သင့်အနေနဲ့ နေ့ရော ညရော ကြိုးစားပမ်းစားနဲ့ လူနဲ့ မတူအောင် အလုပ်တွေ လုပ်နေရ သလိုမျိုး ခံစားနေရတာတောင် သင်လက်ထဲမှာ ပြစရာ ချူးတစ်ပြားမှ မရှိပါဘူးလား?
ဒီလိုဆိုရင် သင့်မှာ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုကို ထိန်းချုပ်တဲ့ အလေ့အကျင့် မရှိတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီအစား တစ်လွဲ အသုံးပြုနေလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ လစာငွေကြေးကို မိမိစီမံမှုအောက်မှာ အကန့်အသတ်နဲ့ထိန်းထားနိုင်တာဟာ ငွေကို ထိန်းသိမ်း ကိုင်တွယ်နိုင်တာထက် သင့်ကိုယ်သင် လေးစား တန်ဖိုးထားတာ ဖြစ်ပြီး၊ ဘ၀ရဲ့ မျှခြေတစ်ခုကို ရှာဖွေနိုင်တာ၊ ဘ၀မှာ သက်တောင့် သက်သာ ရှိအောင် နေနိုင်တာလဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ငမွဲဖြစ်ခြင်း ငွေပျက်ခြင်းကို ရပ်တန့်ဖို့ အတွက် သင့်ရဲ့ ဘာအရေးကြီးသလဲဆိုတာတွေကို သင့်တင့်မျှတအောင် ချိန်ညှိဖို့ လိုအပ်သလို သင့်ကိုယ်သင် ဂရုတစိုက်နဲ့ စောင့်လျှောက်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
၁။ သင်ကိုယ်တိုင်မှ စတင်ပါ
အချိန်ရှိတိုင်း ဘိုင်ပျက်ပြီး ငမွဲဖြစ်နေတာဟာ သင့်ကိုယ်သင် တက်နိုင်သလောက် သင်ကိုယ်တိုင် ဂရုတစိုက် မစောင့်ရှောက်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကိုယ်သင် တန်ဖိုးမထားဘူး ဆိုရင် သင့်ရဲ့ လစာငွေနဲ့ ပိုက်ဆံကိုလည်း ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ တန်ဖိုးထားဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရတာနဲ့ အလွယ်သုံးပစ် မိပါလိမ့်မယ်။ ငွေသုံးတာ၊ ငွေစုတာ၊ ငွေချေးယူတဲ့ နေရာတွေမှာ သင့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာ သင့်ရဲ့ ဘ၀မှာ ဘယ်လို အရည်အချင်းမျိုးနဲ့ နေထိုင်သွားမလဲဆိုတာကို သက်ရောက်မှု ရှိပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှာ ဖော်ပြမဲ့ အချက်တွေက သင့်ကို ငွေကြေးအရ တည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့ အခြေအနေတစ်ခု ရောက်အောင် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ပြန်တည့်မတ်ပေး နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
- ပိုက်ဆံ သို့မဟုတ် ငွေ အသုံးနိုင်ခြင်း
ပိုက်ဆံ သုံးနိုင်တယ်ဆိုတာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးနဲ့ ထပ်တူ မကြပါဘူး။ပိုက်ဆံဟာ သင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မဖော်ပြနိုင်သလို သင့်မှာ Power ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေခြင်းလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့် Power ဆိုတာက ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်နဲ့ မိမိ အတွင်းပိုင်းမှာ ရှိတဲ့ အရည် အချင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံကို အသုံးပြုပြီး ငါ့မှာ Powerful ဖြစ်တယ်လို့ ခံစားနေရတာဟာ မိမိအတွင်းမှာ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေကို လက်ခံတန်ဖိုးထားခြင်း မပြုဘဲ၊ တစိမ်းပြင်ပြကလူတွေ အသိအမှတ်ပြု လက်ခံတာကို ရရှိအောင် ကြိုးစားယူချင်တဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
- Suze Orman ကပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သိမ်ငယ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ငွေကို ပိုသုံးမိကြပါတယ်တဲ့ "spend more than when we feel less than. သင်ဘယ်လောက် အဖိုးတန်တာကို သင်ကိုယ်တိုင် မခံစားမိတဲ့အချိန်မျိုးမှာ သင့်ရဲ့ ငွေအသုံးပြုမှုတွေကို ထိန်းချုပ်လို့ မရတော့အောင်ကို ဖြုန်းတီးမိတက်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိမ်ငယ်တယ် ခံစားရပြီး သင့်အနားမှာ ရှိတဲ့ ပိုငွေသုံးနိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ အပြိုင် ငါလည်း သုံးနိုင်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြချင်တဲ့ အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ မိမိရဲ့ အတွင်းပိုင်း အရည်အချင်းတွေကို မကြည့်မိတော့ပဲ ပြင်ပခံစားချက်တွေကိုပဲ ပိုကြည့်မိပြီး ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ကို အဓိက အန္တရာယ်ပေးမဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
- သင့်ကိုယ်သင် မလေးစားနိုင်တဲ့အချက်က သင်မ၀ယ်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုကိုယ် ၀ယ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အချိန်မျိုးမှာ သင့်အတွင်းစိတ်မှာ နာကျဉ်ခံခက်ဖြစ်ပြီး၊ ငါလိုချင်တာကို ၀ယ်ဖို့ လုံလောက်အောင် ပိုက်ဆံမပေးနိုင်ခြင်း၊ စားချင်တာကို စားဖို့ ပိုက်ဆံမရှိလေခြင်းဆိုတာမျိုး ဖြစ်ပြီး ဘယ်တော့မှ မကြေနိုင်တော့မဲ့ အကြွေးတွေ ထားမိတာ အကြွေးသံသယာကို စတင်မိစေပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီအပြင် အခြားသူတွေကိုလည်း ဒါကိုဖြင့် မလုပ်ပေးနိုင်လေးခြင်းဆိုပြီး အပြစ်ရှာကာ မျက်စောင်းတခဲခဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
-နောက်မှားတက်တဲ့ အချက်ဟာ ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ငွေ အလုံအလောက် ရှိနေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ အသေးအဖွဲ ငွေပမာဏတွေကို ဂရုမပြုတော့ဘဲ လက်ဖွာမိတာ ဖြစ်ပါတယ်။
- သဘောကောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းဖော်က ငွေကြေးအရ ကူညီကောင်း ကူညီပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ မိမိကိုယ်တိုင်က ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်မသုံးဘဲ အကုန်သုံး၊ မရှိမှ ဘိုင်ပျက် ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာမျိုး အမြဲဆိုရင်တော့၊ မိမိ အသုံးစရိတ်ကို မချိန်တွယ်ဘဲ အရမ်းကာရော သုံးနေတာမျိုး ဖြစ်နေရင်တော့ ဒါဟာ မကောင်းတဲ့အချက် ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ကိုယ် ငွေကြေးအရ ကူနေတဲ့သူတွေကို ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုး ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ငွေကြေးပြဿနာကို အဓိကက မိမိကိုယ်တိုင် မဖြေရှင်းဘဲ သူများမကူလို့ စိတ်အခဲ မကြေဖြစ်နေရင် အလွန်ဟာ မိမိကိုယ်တိုင်ဘဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Ref: How to Stop Being Broke by Lisa
ပေါက်ကွဲမှုများတွင် သံသယရှိသူများအား ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ၂၄ နာရီအတွင်း ဖော်ထုတ်ရရှိ
နိုင်ငံတော်အတွင်း လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ပျက်ပြားစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တိုင်းဒေသကြီးအချို့တွင် မသမာသူများက ဖောက်ခွဲမှုများအား လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့် ပြည်သူများ ထိတ်လန့်မှု၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကျမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး နိုင်ငံ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ထိခိုက် ပျက်ပြားစေရန် ဦးတည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စော်ပွားကြီးကုန်း၊ အဝေးပြေးကားဝင်းရှေ့ ကားမှတ်တိုင်ရှိ ခရီးသည်နားနေဆောင် ပေါက်ကွဲမှု၊ သာကေတမြို့နယ် အခွန်လွတ်ဈေး ခြံစည်းရိုးအနီး ပေါက်ကွဲမှု၊ အလုံမြို့နယ် ကမ်းနားလမ်းရှိ Western Park II စားသောက်ဆိုင် စားပွဲခုံအောက်တွင် ကြွပ်ကြွပ်အိပ်ဖြင့် ထုပ်ထားသည့်မိုင်း တွေ့သည့်ဖြစ်စဉ်နှင့် ကျောက်တံတားမြို့နယ် ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်၊ အခန်းအမှတ် ၉၂၁ တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်များတွင် သံသယရှိသူ စောမြင့်လွင် (ခ) မောထ ဆိုသူအား ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း ပြည်သူလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ထို့အပြင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်လေးပင်မြို့မှ ဖြူးမြို့သို့ ထွက်ခွာလာသည့် ဇေယျာဟိန်း ယာဉ်လိုင်းပေါ်တွင် ကြွပ်ကြွပ်အိပ်ဖြင့် ထုပ်ထားသည့်မိုင်း တွေ့သည့်ဖြစ်စဉ်နှင့် တောင်ငူမြို့ ချမ်းမြေ့တည်းခိုခန်းအပေါ်ထပ် အခန်းအမှတ် ၆ တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တို့တွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဟုယူဆရသူမှာ စောစောထွန်းဆိုသူဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ရရှိပြီး ၄င်းအား ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် ပြည်သူလူထုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ အလားတူ မန္တလေးမြို့ အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ၁၆ လမ်းနှင့် လမ်း ၈၀ ထောင့် စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင် မိုင်းတွေ့သည့်ဖြစ်စဉ်၊ ရွှေပြည့်စုံတည်းခိုခန်း စားသောက်ခန်း ပေါက်ကွဲမှုနှင့် ဆွမ်းဦးပုညရှင်စေတီ ယာဉ်ရပ်နားနေရာ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ်တို့အတွက် တရားခံများ ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့များက ပြည်သူလူထုနှင့် ပူးပေါင်းဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။
ကားပေါ်တွင်ကျန်ရစ်သော ပစ်တိုင်းထောင် အရုပ်တစ်ရပ်မှ တီတီအသံထမြည်သဖြင့် ကားသမား ဆင်းပြေးရာမှ ဗုံးလန့်ခဲ့ခြင်း
ရန်ကုန်မြို့ ဘုန်းကြီးလမ်း စံပြမှတ်တိုင်တွင် ပရိုဘောက်စ်တစ်စီးအတွင်းမှ
ဗုံးဟုမသင်္ကာဖွယ်ရာတွေ့ရှိသဖြင့် တပ်မတော်မိုင်းရှင်းလင်းရေး တပ်သား
တစ်ဦးနှင့် မိုင်းရှင်းခွေးတစ်ကောင်မှ ရှာဖွေရှင်းလင်းစဉ်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွင် ဗုံးဟုယူဆရသည့် ကားပေါ်တွင်ကျန်ရစ်သော ပစ်တိုင်းထောင် အရုပ်တစ်ရပ်မှ တီတီအသံထမြည်သဖြင့် ကားသမား
ဆင်းပြေးရာမှ ဗုံးလန့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မစိုးရိမ်ရကြောင်းသိရသည်။
ဲမြန်မာ unit converter application တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ unit များ ပါဝင်ထည့်သွင်းထားပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူစေ၇န် ဖန်တီး ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ အသုံးပြုလိုသူများ free download ရယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
Google play download will come later
နိုင်ငံသားတိုင်း အခွန်ပေးဆောင်စေရန် အခွန်စံနှုန်း သတ်မှတ်ခြင်းဟုဆို
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူမှန်လျှင် နိုင်ငံတော်သို့ အခွန်ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပြီး ယင်းသို့ အခွန်ပေးဆောင်စေရန် အိမ်၊ခြံ၊မြေ အခွန်စံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်း အခွန်များဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်ကျော်က ပြောကြားသည်။
“ဒီနိုင်ငံနေပြီး ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်လို့ရှိရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အခွန်ကိုတော့ ပေးဆောင်ရပါမယ်။ အခွန်ရှောင်တယ် ဆိုတာက ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းကိုလည်း ထိခိုက်စေပါတယ်” ဟု ၎င်းကပြောဆိုသည်။
အခွန်ရှိမှ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ရပ်တည်နိုင်မည် ဖြစ်သည့်အတွက် အခွန်ဆောင်စေလိုကြောင်း မော်တော်ယာဉ် အခွန်စည်းကြပ်ရေး စီမံချက် လုပ်ငန်းကော်မတီ ခေါင်းဆောင် ဦးဇော်အောင်က ပြောကြားသည်။
အခွန်နှုန်းထားသစ်များမှာ အနည်းငယ် များခြင်းကြောင့် အခွန်ဆောင်ရန် ပြည်သူများ လက်တွန့်သွားနိုင်ကြောင်း Estate Myanmar အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ လုပ်ငန်းမှ ဦးဟိန်းမိုးမြင့်လွင်က ဆိုသည်။
“ဒီလိုမျိုး အခွန်စံနှုန်းတွေကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် လုပ်ဆောင်ပေးလိုက်တာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့ သဘောကို ဆောင်ပါတယ်။ ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီး ပြည်သူတွေကို တရားဝင် ထုတ်ပြန်ပေးတာ ကောင်းပါ တယ်” ဟု အိမ်ကမ္ဘာ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းမှ ဦးနေမျိုးအောင်က သုံးသပ်ပြော ဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း မြို့ ပြင် အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ အခွန်စံနှုန်းများနှင့် ယာဉ်အို၊ ယာဉ်ဟောင်း အခွန်စံနှုန်းများသည် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်အကျိုးသက်ရောက်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ စံနှုန်းများနှင့် တင်သွင်း မော်တော်ယာဉ် များကိုလည်း မော်ဒယ်လ်နှင့် နှစ်အလိုက် အခွန်စံနှုန်းများ သတ်မှတ်ရန် စီစဉ်လျက် ရှိကြောင်း ပြည်တွင်း အခွန်များဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။
အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် ၂၀၁၃
ကမ္ဘာ့ကြောက်မက်ဖွယ် အကောင်းဆုံး မူးယစ်ဆေးပါ။ flesh-eating drug လို့တောင် တင်စား ခေါ်နေကြပြီး တားဆီးဖို့ အသည်းအသန် ကြိုးစား နေကြပါတယ်။ ဘိန်းဖြူဆိုတဲ့ မူးယစ်ဆေးဟာ အရင်လို လွယ်လွယ် ရောင်းဝယ်လို့ မရတာကြောင့် တခြားဆေးဝါး တွေကို အစားထိုး အသုံးချ လာပါတယ်။ အခု အခါလည်း US မှာတဖြည်းဖြည်း သုံးစွဲမှု ကြီးမားလာပြီး အန္တရာယ် အဆင့်ရှိတဲ့ ဆေးတစ်မျိုး အကြောင်းကို ဖော်ပြသွား မှာပါ။ အရင်က မူးယစ်ဆေး ဆိုတာ ဘိန်းဖြူ တစ်မျိုး တည်းလို့ သိကြတာပါ။ ဆေးပြား တွေလို ပုံစံမျိုး နဲ့ကော၊ အမှုန့်နဲ့ကော သုံးစွဲကြ သလို ဆေးလိပ်လို ဟာ မျိုး မှာလည်း ထည့်လိပ် ပြီးတော့ ရှုကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ တချို့ကတော့ ဆေးထိုးအပ်နဲ့ ကိုယ်ထဲ ထိုးသွင်း ကြပါတယ်။ တရား ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းပြီး နိုင်ငံတကာက အစွမ်းကုန် တိုက်ဖျက်လာ တာကြောင့် ပေါ်ပေါ်တင်တင် ထုတ်လုပ် ရောင်းဝယ်ဖို့ ခက်လာ ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဘိန်းဖြူ လိုမျိုးလည်း ဇယားမရှုပ်၊ တရားဝင်လည်း ၀ယ်လို့ရတဲ့၊ အာနိသင်လည်း တူတူနီးပါး ရတဲ့ဟာမျိုး တွေကို အစားထိုး လာကြ ပါတယ်။ ဥပမာ ဆိုရရင် ကော်ရှုကြ တာမျိုးပါ။ နောက်တစ်မျိုး ကတော့ လူကို မူးစေတဲ့ အာနိသင် ရှိတဲ့ တရားဝင်ဆေး တွေပါ။ ဆေးဆိုင်လို ဟာမျိုး မှာတောင် ၀ယ်လို့ရလို့ အန္တရာယ် ကြီးပါတယ်။ အကျဉ်းချုပ် ရရင် လူတွေဟာ မူးယစ်ဆေးကို နည်းလမ်း အမျိုးမျိုးနဲ့ သုံးစွဲကြတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ယခုအခါ မှာလည်း ကိုယ်ထဲကို ဆေးထိုးအပ်နဲ့ ထိုးသွင်းပြီး သုံးစွဲတဲ့ "Krokodil" ဆိုတဲ့ မူးယစ်ဆေး တစ်မျိုး ပေါ်လာ ပါတယ်။ မူရင်း ထင် ရှားတဲ့ Russia ကလာတဲ့ ဒီမူးယစ်ဆေးဟာ ရုရှားလို မိကျောင်းလို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ US က Chicago ဆင်ဖြေဖုံး ရပ်ကွက် တွေမှာ ၈ဒေါ် လာ လောက်နဲ့ ၀ယ်လို့ရပြီး ၂၅ ကနေ ၃၀ဒေါ်လာ အထိ ပေးရတဲ့ ဘိန်းဖြူနဲ့ စာရင် အများကြီး ဈေးသက်သာ တာကြောင့် လူကြိုက်များ ပါတယ်။ ချောင်းဆိုး ပျောက်ဆေး Codeine ဆေးပြား၊ Iodine နဲ့တခြားသော ပေါပေါရတဲ့ အရည် တချို့ကနေ လွယ်လွယ် ပြုလုပ်ထား တဲ့ဒီ Krokodil ဆေးဟာ Morphine လိုမျိုး အစွမ်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်မူးယစ်ဆေး မဆို ကောင်းကျိုး မပေးပါဘူး။ အဲဒီဆေးဟာ အ သားတွေကို ပုပ်ပြဲစေ သလို အသား တွေကို အစိမ်းရောင် သဲ့သဲ့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းစေ ပါတယ်။ အဆိုးဆုံး ကတော့ အသားတွေ ပုပ်ပြဲလာ တာကြောင့် အရေပြား အောက်က အရိုးတွေ၊ ကြွက်သားတွေ အတိုင်းသား မြင်ရပြီး ပြင်ပရောဂါ တွေပါ ကူးစက်လာ တာပါပဲ။ flesh-eating drug လို့တင်စား ခေါ်ဝေါ် နေကြပါတယ် အခုဆိုရင် Krokodile ပျော်စံရာ Chicago ကဆရာဝန် တွေဟာ ဆေးရဲ့ ဘေးဥပါဒ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေကို အသည်းအသန် ကုသနေ ရတဲ့ ဘ၀ ရောက်နေ ပါတယ်။ ကံဆိုးလို့ သွားရာ မိုးလိုက်လို့ရွာ ဆိုသလိုပါပဲ။ Arizona နဲ့ Utah ပြည်နယ် တွေကိုလဲ အဲဒီဆေးတွေ ပျံ့နှံ့ နေပါပြီ။ မီဒီယာ တွေရော၊ အစိုးရ ကပါ သတိပြု မိလာ တာကြောင့် မကြာခင်မှာ ထိရောက်တဲ့ စစ်ဆင်ရေး တွေနဲ့ ဖြေရှင်း သွားဖို့ ကိုတော့ မျှော်လင့် ရပါဦးမယ်။ ဘိန်းဖြူမှ မဟုတ်ပါဘူး။ မူးယစ် စေတဲ့ ဆေးမှန်သမျှ အားလုံး ဝေးဝေးက ရှောင်သင့် ပါတယ်။ ရှောင်ကြဉ်ရုံ တင်မကပဲ သူတစ်ပါးတွေ ရောင်းဝယ်တာ၊ သုံးစွဲတာတွေ တွေ့ရှိမိရင် သက်ဆိုင်ရာကို အမြန် သတိပေး သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာကြီးဟာ မူးယစ်ဆေး ကင်းစင်တဲ့ သာယာတဲ့ လောကကြီး တစ်ခု ဖြစ်လာ မှာပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချုပ် လိုက်ရ ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) အဖွဲ့အစည်းမှ ဖန်တီးလိုက်တဲ့ Headphone ဖြစ်ပါတယ်။
မပြီးပြည့်စုံသေးပါဘူး။ Under development ပါ။ စိတ်က ခံစားချက်များကို Headphone ကလိုက်မှတ်ပီး ဖုန်းထဲကို Bluetooth နဲ့ ပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာ ကြားခံဆက်သွယ်ပေးမယ့် App တစ်ခုသာ Install လုပ်ရမှာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဦးနှောက်ကနေ ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ စာကို စဉ်းစား ရေးလိုက်ရုံနဲ့ ဖုန်း Message ထဲမှာ အလိုအလျောက် ရေးသားပြီး ပို့ချင်တဲ့သူကို choice လုပ် ပို့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။Headphone မှာတပ်ဆင်မယ့် ပစ္စည်းက Brain Recording Device ဖြစ်တဲ့ EEG Reading ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားချက် အနေနဲ့ ကတော့ အကုန်ကျ သက်သာတဲ့ ပစ္စည်း ဖြစ်ခြင်းပါ။ လက်ရှိ Emotive gaming မှာ ပါဝင် အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်း ဖြစ်ပြီး ဈေးအသက်သာ ဆုံး ဖြစ်အောင် ဖန်တီးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Headphone တစ်ခုလုံးရဲ့  ကုန်ကျစရိတ်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ၃၀ ထဲပါ။ ကားစီးနေရင်း၊ မောင်းနေရင်း၊ ခရီးသွားနေရင်း၊ ရထားစီးနေရင်း အချိန်တွေ စာပို့ဖို့မအားတဲ့အခါ ပြီးတော့ ဖုန်းကနေ ဂိမ်းဆော့နေရင် စာဝင်လာတာတွေ ကို ပြန်ဖြေကြားဖုိ့အတွက်နဲ့ အခြားသော Feature အတော်များများကို အသုံးပြုနိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Darpa ဟာ ယင်းပစ္စည်းကို နှစ် အနည်းငယ် အတွင်း အပြီးသတ် ထုတ်လုပ်ဖန်တီးသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ကော်ဖီ - ကဖင်းပါသော အစားအစာများသည် အစာအိမ်အက်ဆစ်ဓါတ်ကို လွန်ကဲစေသည်။
ချိစ်ကိတ် - အဆီပါဝင်မှုများသော အစားအစာများသည် အစာအိမ်အက်ဆစ်ဓါတ် လျှံတက်စေပြီး ရင်ပူစေသည်။
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း – ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းသည် လေပွစေပြီး အစာအိမ်အက်ဆစ်ဓါတ်ကို လျှံတက်စေသည်။
အချဉ်သစ်သီးများ - အချဉ်ဓါတ်သည် အစာအိမ်အက်ဆစ် လွန်ကဲစေ သည်။
အရက် - ဘီယာ၊ ၀ိုင်နှင့်အရက်များသည် အစာအိမ်ရောင်သည်အထိ ဖြစ်သည်။
အစပ် – ငရုတ်သီး၊ချင်း စသည့် ပူစပ်သည့် အစားအစာများသည် အစာအိမ်အက်ဆစ်ကို ပိုပြင်းစေပြီး ဗိုက်အောင့်စေသည်။
ချောကလက်- ချောကလက်သည် အစာအိမ်အက်ဆစ်ဓါတ်ကို မမြင့်တက်စေသော်လည်း အစာရေမျိုပြွန် (oesopha gus) ကြွက်သားကို ပျော့ပြောင်း စေသည့်အတွက် အစာအိမ်အက်ဆစ်များကို ပြန်အန်ထွက်စေပြီး ရင်ပူစေသည်။
ခရမ်းချဉ်သီး- ခရမ်းချဉ်ကိုယ်၌ပင် အက်ဆစ်ဓါတ်များစွာပါဝင်ပြီး အစာရေမျိုပြွန်ကိုလည်း ပျော့စေသည့်အတွက် ရင်ပူစေသည်။ ခရမ်းချဉ်သီး အချဉ်ရည်များသည်လည်း အစာအိမ် အချဉ်ပေါက်စေသည်။
အစားကြီးခြင်း- ညမအိပ်ခင် နှစ်နာရီ မှသုံးနာရီအတွင်း အစာအမြောက်အမြားစားထားလျှင် အစာရေမျိုပြွန် နှင့် အစာအိမ်တို့ကြားပြွန်ပေါက်ကို ဖိအားသက်ရောက်မှုကြောင့် အစာအိမ်အက်ဆစ်များ အပြင်ထွက် ကာ ရင်ပူတတ်သည်။
စစ်ကိုင်းတွင်လည်း ဗုံးနှစ်လုံး ထပ်မံပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး လူသေဆုံးမှုနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှု မရှိ
ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ တောင်ငူနှင့် ဖြူးမြို့နယ်များတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ၊ ဗုံးတွေ့ရှိမှုများ၊ ဗုံးဟု မသကာင်္ဖွယ်ရာ တွေ့ရှိမှုများ ဖြစ်ပွားနေပြီးနောက် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်း ၃ နာရီ မိနစ် ၃၀ အချိန်နှင့် ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ် အချိန်ဝန်းကျင်က စစ်ကိုင်းမြို့ပေါ်ရှိ ရွှေပြည့်စုံဟိုတယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးရှိ ဆွမ်းဦးပုညရှင် စေတီတော်တို့၌ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့ နံနက် ၃ နာရီမိနစ် ၃၀ အချိန်ခန့်က စစ်ကိုင်းမြို့၊ ပန်းဘဲတန်းရပ် အိုးတန်း (၄)လမ်းကြားရှိ ရွှေပြည့်စုံ ဟိုတယ်၏ ၄ ထပ်မြောက်ရှိ စားသောက်ခန်း အတွင်း၌ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူသေဆုံးမှုနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှု မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
"ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့ အချိန်က ဟိုတယ်မှာ လူ ၄၄ ယောက် တည်းခိုသွားတယ်။ အခု အဲဒီလူတွေကို စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေ လုပ်နေတယ်။ ဒီအနီးတစ်ဝိုက်မှာ နောက်ထပ်ဗုံးတွေ ရှိမရှိကိုလည်း စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာ တပ်ရင်းက လာပြီးစစ်ဆေး ပြီးသွားပြီ။ ဗုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မသကာင်္စရာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ၊ လူတွေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်အောင်လို့လည်း ဟိုတယ်မှာ တပ်ထားတဲ့ စီစီတီဗွီ ကင်မရာ ၄ လုံးကနေပြီး အခုရှာဖွေမှုတွေ လုပ်နေပါပြီ" ဟု စစ်ကိုင်းရဲစခန်းမှ စခန်းမှူး ဒုရဲမှူး သိန်းဆွေက အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက် နံနက် ၈ နာရီ ၀န်းကျင်က The Daily Eleven သို့ ပြောကြားသည်။
ယင်းသို့ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားအပြီး ၂ နာရီကျော်ခန့်အကြာ နံနက် ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ် ၀န်းကျင်တွင်လည်း စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးရှိ ဆွမ်းဦးပုညရှင် စေတီတော်၏၀င်ပေါက် ကားပါကင်ထားရှိရာ အရှေ့ရှိ ပန်းခုံ၌လည်း ပေါက်ကွဲမှု ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယင်းသို့ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ပန်းခုံ၏ အောက်ခြေအနီးတစ်ဝိုက် ပျက်စီးခဲ့ပြီး အနီးဝန်းကျင်ရှိ လူများမှာမူ သေဆုံးမှုနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှု မဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
"ဗုံးလာထောင်တဲ့သူဆိုပြီး မသကာင်္စရာလူတော့ သတိမထားမိဘူးဗျ။ မနက် အစောပိုင်းကြီး ပေါက်သွားတာဆိုတော့ ညပိုင်းလောက်က လာထောင်သွားတာပဲ ဖြစ်မှာပေါ့။ နေ့ခင်းပိုင်းဆိုရင်တော့ ဘုရားပေါ်မှာ လူတွေရှိတော့ တစ်ယောက်မဟုတ်၊ တစ်ယောက်တော့ သတိထားမိ မှာပါဘဲ။ တခြားမြို့တွေမှာလည်း ဗုံးတွေပေါက်နေတာ ကြားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့လို အခြေခံ လူတန်းစား၊ တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စားတွေကတော့ ဗုံးအန္တရာယ် ရှိနေပေမယ့်လည်း အလုပ်တော့ လုပ်ရမှာပါပဲ။ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရမှာ ဆိုတော့လေ" ဟု ဆွမ်းဦးပုညရှင် စေတီတော် အနီးတွင် ဈေးရောင်းသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
(စစ်ကိုင်းမြို့ရှိ ရွှေပြည့်စုံ ဟိုတယ် စတုတ္ထထပ် စားသောက်ခန်းအတွင်း ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ပျက်စီးမှုများအား တွေ့ရစဉ်)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး နယ်မြေအတွင်း အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက် နံနက် ၀၀ နာရီ ၁၅ မိနစ်ကအင်းစိန် မြို့နယ် စော်ဘွားကြီးကုန်း ရပ်ကွက် ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း စော်ဘွားကြီးကုန်း ကားမှတ်တိုင်တွင် ပေါက်ကွဲမှု တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မပေါက်ကွဲ သေးသည့် လက်လုပ် မိုင်းတစ်လုံးကို ရှင်းလင်းနိုင်ခြင်းနှင့် ယင်းနေ့တွင်ပင် ညနေ ၅ နာရီ မိနစ် ၄၀ က သာကေတ မြို့နယ် ၃/ မာန်ပြေရပ်ကွက် ယမုံနာလမ်း အခွန်လွတ်ဈေးရှေ့ လမ်းဘေးပလက်ဖောင်း အနီးရပ်ထားသည့် နောက်တွဲ ယာဉ်အောက်တွင် တွေ့ရှိသည့် ကြွပ်ကြွပ်အိတ် အမည်းဖြင့် ထုပ်ထားသည့် အထုပ်အား ထက်နိုင်အောင် (၁၄ နှစ်) နှင့် ဝင်းမင်းထွေး (၁၄ နှစ်)တို့က ၎င်းအိတ်အတွင်းရှိ နာရီလက်တံအား လှည့်စဉ် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ၎င်းလူငယ် နှစ်ဦးတွင် (မစိုးရိမ်ရ) ဒဏ်ရာများရရှိ ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး နယ်မြေအတွင်း ပေါက်ကွဲမှု နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ မှူး၏ လမ်းညွှန်ကြီး ကြပ်မှုဖြင့် တိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ်များတွင် လုံခြုံရေးတိုးမြှင့် ချထား ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပြီး အများပြည်သူများ အနေဖြင့် ဘူတာများ၊ ကားဝင်းများ၊ ကားဂိတ်များ၊ သင်္ဘောဆိပ်များ၊ လူစည်ကားရာ နေရာများနှင့် လမ်းကြို လမ်းကြား များတွင် မသင်္ကာအထုပ်များတွေ့ရှိပါက ဖွင့်ဖောက်ခြင်းများ မပြုလုပ်ဘဲ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ထံနှင့် မြို့နယ်ရဲစခန်းများသို့ ချက်ချင်းသတင်းပို့ပေးကြ ရန်နှင့် ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကလည်း မိမိရပ်ကွက်ရှိ ရာအိမ် မှူး၊ ဆယ်အိမ်မှူးများအား ဆက်လက်သတင်း ပေးပို့ပေးနိုင်ရေး အသိပေး အကြောင်းကြား ထားပေးပါရန် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ မေတ္တာရပ်ခံ လိုက်သည်။ အများပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း ယခုကဲ့သို့ ပြည်သူများ အထိတ် တလန့်ဖြစ်အောင်နှင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသေစေအောင် အဖျက်အမှောင့် လုပ်ငန်းဖြစ်သည့် ပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်အောင် လုပ်ဆောင်နေ သူများအား ဝိုင်းဝန်းကူညီပူးပေါင်း ပါဝင် ဖော်ထုတ်ပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော် မေတ္တာ ရပ်ခံအပ်ကြောင်း နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ယနေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော ဗုံးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား
ဒသမနေကို တက်ရောက်လာစဉ် လတ်တလော ပြည်တွင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော ဗုံးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မီဒီယာများမေးမြန်းမှုကို
အမေတို့ကလိုက်ဖမ်းနိုင်တဲ့သူတွေမှ မဟုတ်တာ လုံခြုံရေးအစီအစဉ်အားနည်းတယ်လို့ပြောရအောင်လည်း ဘယ်တွေမှာဗုံးတွေချ
တယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။အရေးကြီးတာက ဘယ်သူတွေ လုပ်လဲဆိုတာမြန်မြန်ဖေါ်ထုတ်ဖို့ပါဘဲ။
ဗုံးတွေဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမေကတော့ဒါပေမယ့် အမေကတော့ ယုံကြည်တယ် အမေတို့ ပြည်သူတွေက
ခေါင်းအေးအေးနဲ့ စဉ်းစားတတ်မှာပါ။ဒါတွေကတ မင်ပေါ့နော်လုပ်လုပ်ရှားရှားဖြစ်အောင်လို့စွတာဆိုတော့အဲ့ထောင်ချောက်ထဲ ၀င်မသွားဖို့ လိုတယ်။ တမင်စိတ်လှုပ်ရှားအောင် လန့်အောင်ဖြန့်အောင်
တမင်လုပ်တာဆိုတော့ ဒီထောင်ချောက်ထဲ ၀င်မသွားဖို့ လိုတယ်။ပြည်သူတွေက ခေါင်းအေးအေးနဲ့ စဉ်းစားတက်ဖို့လိုတယ်။ဒါကို သတိတော့ ထားရမှာပေါ့။
စိုးရိမ်မှု လွန်ကဲနေလို့တော့ ဘယ် ဖြစ်မလဲ ။လူများတဲ့ နေရာသွားရင် အန္တရယ် ဖြစ်မလားဆိုတာ စိုးရိမ်လာရတာပေါ့။သတိရှိတာတော့ မမှားပါဘူး။ဒါပေမယ့်
အစိုးရိမ်လွန်နေလို့တော့လည်းမကောင်းဘူးဘာဘဲပြောပြော မဇ္စိမပရိပရာပေါ့ ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလည်းရေးနှင့်ပတ်သပ်ပြီးမေးမြန်းရာ အဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်
ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော် ဒါက အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆ်ိုင်ရာက ဘယ်သူတွေဟာလုပ်တာလည်းဆိုတာ ဖေါ်ထုတ်ပေးမှဖြစ်မှာပေါ့၊ မှန်းခြေနဲ့သိမ်စဉ်းစားနေရင်
တခါတလေမဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ် တင်းမာမှုတွေဖြစ်သွားနိုင်မယ် စသည်ဖြင့်ဖြေကြားခဲ့သည်။
သတင်းနှင့်ဓါတ်ပုံ-National League for Democracy
၁၅၊၁၀၊၂၀၁၃ ရက်နေ့ နံနက် (၉)နာရီ(၃၀)မိနစ်အချိန်က ကသာမြို့ အကျဉ်းထောင်အတွင်း ထောင်ကျတရားခံအား ထောင်ဝင်စာ လာတွေ့သည့် ဇနီးသည်ထံမှ ဘိန်းမည်းများ ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်၊
ဖြစ်စဉ်မှာ ကသာထောင်အတွင်း ဘိန်းမှုဖြင့် ထောင်ကျနေသည့် မောင်အိုက်(ခေါ်)မောင်ထွေး ထံ ထောင်ဝင်လာတွေ့သည့် မဖြူဖြူဝင်း(၂၉နှစ်)နတ်တော်ရွာ ရေကန်သာ အုပ်စု၊ကောလင်းမြို့နယ်၊ယူဆောင်လာသော
ထောင်ဝင်စာငပိကျော် ဗူးအား စစ်ဆေးရှာဖွေရာ ငပိကျော်ဗူးအတွင်း မြုတ်နှံသိုဝှက်လာသည့် ပလပ်စတစ်ဗူးငယ် အတွင်း ဘိန်းမဲထုတ် (၁၅)ထုတ်အး တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်၊
မဖြူဖြူဝင်း၏ အစစ်ခံချက်အရ သူသည့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ မောင်အိုက် ကို အလွန်ကြောက်ရပါကြောင်း၊ယခင်အပတ် ထောင်စာ လာတွေ့စဉ်ကလည်း အကြိမ်ကြိမ် မောင်အိုက်က သူမြေကြီးထဲ မြုတ်ထားသည့် ဘိန်းမဲ(၁၅)
ထုတ်ကို ယူ၍ ငပိကျော် ဗူးထဲ မြုတ်ခဲ့ရန် ခိုင်းစေခဲ့ကြောင်း၊ သူမတွင် (၂)နှစ်အရွယ် သားနှင့် (၁၀)နှစ်အရွယ်သမီးတစ်ယောက် ရှိကြောင်း၊မောင်အိုက် ထောင် မကျခင်ကတည်းက အရိုက်အနှက် ရက်စက်သဖြင့်
ငယ်ကြောက်လို ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း၊ မောင်အိုက် ထောင်ကျကတည်းက တစ်ရက်လျှင် (၂၀၀၀)ကျပ်နှုန်းဖြင့် မြက်နှုတ် ပေါင်းရှင်း လုပ်စားခဲ့ပြီး ထိုရရှိငွေများကို ကလေး ကျောင်းစားရိတ်နှင့် မောင်အိုက် ထောင်ဝင်စာစားရိတ်
အဖြစ် သုံးခဲ့ပါကြောင်း သိရှိရပါသည်၊
ထိုဖြစ်ရပ်နှင့် ပါတ်သက်၍ ဘိန်းမည်းဟု ယူဆရသော အထုပ်ငယ်(၁၅)ထုတ် (သတ်မှတ်တန်ဘိုး ၇၅၀၀၀တန်ဘိုးရှိ)ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သူ မဖြူဖြူဝင်းအား ကသာရဲစခန်းမှ မယ(ပ)၂၃/၁၃အရ တိုင်ချက်ရေးသွင်းပြီးး
မူးယစ်စေတတ်သော စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသည့်ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၅/၁၆(ဂ) တို့ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ဒုရဲအုပ် ဌေးဝင်းမှ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
မဟာဗန္ဓုလနှင့် ၃၈လမ်းထောင့် အမှိုက်ပုန်းပေါ်တွင် မသင်္ကာဖွယ်ရာ အတာချီကေ့တလုံးတွေ့၊ဗုံးမဟုတ်ဘဲ လက်ကိုင်အိတ်တလုံးသာဖြစ်
ယနေ့နံနက်၁၀နာရီက မဟာဗန္ဓုလနှင့် ၃၈လမ်းထောင့်ရှိ အမှိုက်ပုန်းပေါ်တွင်
ဗုံးမဟုတ်ဘဲ လက်ကိုင်အိတ်တလုံးသာဖြစ်ပြီး အိတ်ထဲတွင် ဘာမှမပါကြောင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးမှရဲမှူးဦးဝင်းကြည်က ပြောသည်။
စည်ပင်ကတွေ့ပြီးရဲကို အကြောင်းကြားလိုက်တာပါဟု ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ဦးကပြောသည်။
ဓါတ်ပုံ-အောင်နိင်စိုး(ကစ္ဆပ) — အတာချီကေ့တလုံးတွေ့၊ဗုံးမဟုတ်ဘဲ လက်ကိုင်အိတ်တလုံးသာဖြစ် (4 photos)
စစ်ကိုင်းမြို့၊ ရွှေပြည့်စုံဟိုတယ် တတိယထပ် စားသောက်ခန်းမှာ ဗုံးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့
ပေါက်ကွဲမှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူတွေက စတင်စစ်ဆေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်နေ့ညကလည်း ရန်ကုန်မြို့၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း Traders ဟိုတယ်မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တည်းခိုနေတဲ့ အမေရိကန်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
မန္တလေး၊ ရန်ကုန်၊ Traders Hotel ဗုံးတရားခံတွေ အကုန်နီးပါး မိပြီ
Western Park Ruby ဗုံး တရားခံတွေလည်း မိပြီ
Western Park Ruby တွင် ထားရှိခဲ့သော ဗုံးနှင့် သက်ဆိုင်သူ၊ ဆိုင်မှ အကြော်ဆရာ၏ သူငယ်ချင်း သုံးဦးအား ကဝမြို့နယ်တွင် လွန်ခဲ့သော ၂ နာရီခန့်က ဖမ်းဆီးရမိပြီး မည်သည့် အဖွဲ့အစည်း၊ မည်သူက စေခိုင်းကြောင်း စစ်ဆေးလျက်ရှိပါသည်။
သတင်းအစုံကို ဆက်လက် အတည်ပြုတင်ပြပေးပါမည်။
မန္တလေးဗုံး တရားခံလည်း ရှာတွေ့ပြီ
မန္တလေးမှာဗုံးထောင်တယ် လို့ယူဆရသောတရားခံကိုခြေရာ ခံမိပါပြီ တည်းတဲ့ဟော်တယ်မှာ CCTV မှတ်တမ်းကျန်ပါတယ် အတိအကျ ပြောရင် သတင်းပေါက် သလိုဖြစ်မှာစိုး လို့ပါ သေချာတာက တော့မလေး ရှားနိုင်ငံ Passport ကိုင်ဆောင်သူတစ်ဦးနှင့်အတူတည်း သွားကြောင်း ပါ ။ မယုံရင်လည်းကိစ္စ မရှိပါ ယုံကြည်သူ များ သက်ဆိုင်ရာကိုိပူးပေါင်းသတင်းပေးနိုင်ရန်သာဖြစ်ပါသည်
ဆက်စပ် သတင်း >>> Traders Hotel ဗုံးတရားခံလည်း မိပြီ
မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မသင်္ကာဖွယ်ရာ မျက်နှာစိမ်းများတွေ့ရှိရပါက သတိထားစောင့်ကြည့်ပါ။ မည်သူမဆိုမသင်္ကာဖွယ်ရာ လှုပ်ရှားပြုမူဆောင်ရွက်လာပါက ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအချက်ပေးပါ။ သက်ဆိုင်ရာသို့အကြောင်း ကြားပါ။ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများပို့ဆောင်ပေးရန် မိမိအကျွမ်းမ၀င်သူများကခိုင်းစေလာပါက (အကူအညီတောင်းလာပါက)သတိရှိပါ။ မိမိအကျွမ်းမ၀င်သော (ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်သော) ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများတွေ့ရှိပါက ကိုင်တွယ်စမ်းသပ်ခြင်း၊ဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုရ။ ဆန်းကျယ်သော၊တန်ဖိုးရှိသော၊ စွဲဆောင်မှုရှိသော ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများတွေ့ရှိပါက ကောက်ယူကြည့်ရှုကိုင်တွယ်ခြင်းမပြုသင့်။ ကလေးသူငယ်များနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုလည်း ကြိုတင်သတိပေးမှာကြားထားပါ။ လူသူကင်းမဲ့သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်နားထားခဲ့သော ယာဉ်နှင့်စက်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်အသုံးမပြုမီ သေချာစွာစစ်ဆေးပါ။ လူထူထပ်သောနေရာ (ပွဲတော်၊ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ဘူတာ၊ဈေး၊စားသောက်ဆိုင်စသည်) တွင် ပိုင်ရှင်မဲ့ပစ္စည်းများတွေ့ရှိရပါက သက်ဆိုင်ရာသို့ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအချက်ပေးပါ။ ဝေးဝေးနေပါ။ မိမိအကျွမ်းမ၀င်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် တစ်ဖက်မြင်(အဆုံးအစမထင်ရှားသော) ကြိုးစ ကြိုးနနှင့်တုတ်ချောင်းသံချောင်း များတွေ့ရှိပါက ဆွဲနှုတ်ခြင်း၊ ဖိနင်းခြင်း၊ ဆောင့်ဆွဲခြင်းမပြုရ။ အခြားသူများလည်း ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန် အချက်ပေးသင်္ကေတတစ်ခုခုဖြင့် သတိပေးခဲ့ပါ။ မိမိမှာကြားထားခြင်းမရှိသော ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများအလိုအလျောက် ရောက်ရှိလာပါက (ပေးပို့လာပါက) လက်မခံပါနှင့်။ သက်ဆိုင်ရာသို့ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။ ဝေးဝေးနေပါ။ မိမိပတ်ဝန်းကျင်၏အခြေအနေအရပ်ရပ် (လူ၊ယာဉ်၊ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်း၊ တိရိစ္ဆာန်များ) ကိုအမြဲမပြတ်လေ့လာထားပါ။ ထူးခြားသော မသင်္ကာဖွယ်ရာ ပြောင်းလဲမှုများတွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာသို့အကြောင်းကြားပါ။ ဒီအပေါ်မှာပြထားတဲ့အချက်တွေကတော့ ဗုံးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ လူတိုင်းလိုက်နာရမယ့်ယေဘူယျ ကျတဲ့ အချက်တွေလို့ဆိုပါတယ်။ အင်တာနက်မှာရှာကြည့်တဲ့အခါ ကာကွယ်တားဆီးရေးနည်းလမ်းအသေးစိတ်ကို အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာမျက်နှာပေါင်း၁၄၀ ကျော်လောက်တွေ့ရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာညံ့လွန်းတဲ့ကျနော့်အတွက် မဟာစိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်တာမို့ အသေးစိတ်တော့ ချမရေးပြနိုင်တော့ပါဘူး။ နောက်ပြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ အတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးအပေါ်အခြေခံပြီး ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိနေတာမို့ ကိုယ့်နိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီမယ့် လိုရင်းကိုရောက်မယ့် အခြေခံအချက်တွေကိုပဲ ဖော်ပြပါတယ်။ အောက်မှာ ဆက်ပြီးပြောချင်တာက အဆောက်အဦထဲမှာ ဗုံးထောင်ထားပါတယ်လို့ ဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးသတင်းပေးလာတယ်ဒါမှမဟုတ် ခြိမ်းခြောက် လာတယ်ဆိုရင် လုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံနဲ့တကွဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ နားလည်သလောက်လည်း ဘာသာပြန်ပေး လိုက်ပါတယ်။ လွဲရင်လည်းထောက်ပြပေးပါ။ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပေးဖို့လည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
သွေးတိုး ရောဂါကို သက်သာ စေမည့် နေထိုင် သွားလာမှုနှင့် အစားအသောက်
သွေးတိုးအတွက် စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်နေတဲ့သူတွေ အတွက် သွေးကို ထိန်းပေးနိုင်မယ့် အစားအသောက် အကြောင်းပြောရရင်-
သွေးတိုးဆိုတာ သွေးဖိအားအပေါ် သွေး ၁၄ဝ မီလီမီတာနဲ့ အောက်သွေး ၉ဝ မီလီမီတာ မာကျူရီထက် မပိုသင့်ဘူး။ သွေးတိုးဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်း ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီး ဆက်နွှယ် စဉ်းစားရတာက ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းသော လူတွေရဲ့ စားသောက်မှုနဲ့ နေထိုင်မှု ပုံစံတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်။
လူတွေ အပျင်းကြီးလာတယ်။ ထိုင်ရာကနေ မထနိုင် ဖြစ်လာကြတယ်။ လက်နဲ့ ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘဲ အိမ်အကူ ခေါ်ကြတယ်။ လှေကားအတိုင်း မတက်ဘဲ၊ စက်လှေကား၊ ဓာတ်လှေကားနဲ့ တက်တယ်။ လမ်းမလျှောက်ဘဲ ကားနဲ့ သွားလာကြတယ်။ နေ့စဉ် နာရီဝက် အားကစားလုပ်၊ လမ်းလျှောက်၊ အပြေး၊ စက်ဘီးစီး မလုပ်ဘဲ၊ တီဗွီကြည့်၊ ဂိမ်းထိုင်နှိပ်ကြတယ်။ အသင့် အမြန်စား အစားအစာတွေ များလာတယ်။ အချိုမှုန့်၊ ကြက်သားမှုန့်နဲ့ အငန်တို့လို အစားအသောက်တွေ စားတော့ သွေးပေါင် တက်လာစေတယ်။
ဆီးချို ဟော်မုန်းထုတ်လုပ် ဂလင်းပုံမှန် မဖြစ်တဲ့ ရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနဲ့ ဆေးဝါးရဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေကြောင့် သွေး တိုး ဖြစ်လာစေတယ်။ ပဋိသန္ဓေတားဆေး စတီးရွိုက်နဲ့ ဟော်မုန်းစားရင် သွေးတိုးစေတယ်။
သွေးတိုးကို မကုဘဲထားရင် ရေရှည်ခန္ဓာကိုယ် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အဖွဲ့အစည်းတွေကို တိုက်ခိုက် ခံရတတ်တယ်။ သွေးကြောတွေ ပျက်စီးစေပြီး အချိန်မတိုင်မီ နှလုံးက သွေးညှစ်အား မကောင်းခြင်း၊ လေသင်တုန်း ဖြတ်ခြင်းဖြစ်စေတယ်။
ဆီးရွှင်ဆေးဟာ အရည်နဲ့ ဆားဓာတ် ဖယ်ထုတ်ပေးပြီး သွေးကြောတွေရဲ့ ခုခံအားကို လျော့စေတယ်။ ဘီတာဘလော့ကာတွေ က နှလုံး ခုန်နှုန်း နှေးစေပြီး နှလုံးကြွက်သား အားလျော့စေတယ်။ ဖေဆိုဒိုင်လေတာက သွေးလွှတ်ကြော ချဲ့ပေးတယ်။ အေစီအီးအင် ဟစ်ဗစ်တာ က သွေးကြောကျယ်တဲ့ ဆေးအနေနဲ့ရော ဆီးချိုအနေနဲ့ပါ အကျိုး သက်ရောက်စေတယ်။
သွေးဖိအား ပုံမှန်ဖြစ်သွားပေမဲ့ ရေရှည်ဆေးဝါး သောက်ရတယ်။ အနားယူခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှု လျှော့ချရေး၊ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရေး၊ နေ့စဉ် နာရီဝက် အားကစား၊ အပြေး၊ လမ်းလျှောက်၊ စက်ဘီးစီး လုပ်သင့်တယ်။
သွေးတိုးတာ ကာကွယ်ဖို့ ဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင်ပစ္စည်း ကြွယ်ဝတဲ့ အစာ စားသုံးသင့်တယ်။ ဘီတာကယ်ရိုတင်း၊ ဗီတာမင်စီ၊ ဗီတာမင်အီးနဲ့ ဆီလီနီယမ် သတ္တုဓာတ် ကြွယ်ဝတဲ့ အစာ စားသင့်တယ်။ ဂျုံစေ့အဆန်၊ အခွံမာသီး၊ ဗီတာမင်အီး ကြွယ်ဝတာတွေကို စားသင့်တယ်။ သည်အစာထဲက ငါးမျိုးကို နေ့စဉ်စားသင့်တယ်။ အဆီများတဲ့ ပင်လယ်ငါးစားရင် အိုမီဂါ သုံးနဲ့ အိုမီဂါ ခြောက်၊ ဖက်တီး အက်စစ်ပါနေတာကြောင့် သွေးတိုး သက်သာစေတဲ့ သွေးဖိအား လျော့ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲက မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောကို သန့်စင်ပေးပြီး သွေးခဲနိုင်မယ့် အလားအလာ လျှော့ပေး တယ်။ အကောင်းဆုံး၊ အသင့်လျော်ဆုံးက အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်တဲ့ အစားတွေပဲ။ ကွေကာ၊ ခေါက်ဆွဲကြော်၊ ထမင်းနဲ့ဟင်း၊ ပေါင်မုန့် စားပေးသင့်တယ်။ အဆီများတဲ့ အသား၊ မလိုင်ပါတဲ့ နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်း၊ ကိတ်မုန့်၊ ဘီစကွတ်များ၊ မာဂျရင်းတို့ လျှော့စားရမယ်။ ဆားပါဝင်မှုများတဲ့ အစားအစာနဲ့ မုန့်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့စားပါ။ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ် မြင့်တဲ့ အားဆေးကို ဆင်ခြင်သောက်ရမယ်။ ပိုတက်စီယမ် ကြွယ်ဝတဲ့အစား (ငှက်ပျောသီး)စားပါ။ ။